Nhau - Brand Nyowani Yega Kugadzira Mushini weHeparin Cap
Sezvo isu tese tichiziva, sainzi uye tekinoroji ichave ari ekutanga masimba ekugadzira mune 21 century. Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd gara uchiteedzera kuvandudzwa kwenguva. Musi waChikunguru 17th 2018, Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd inotenga nyowani Yega yekugadzira muchina we heparin cap. Iyo inhau huru kunhengo dzese muHuaian Medicom Medical Technology Co, Ltd. Kune matatu akanaka maitiro anova kugona, mhando uye kudzikisa mutengo wevashandi.
Chekutanga pane zvese, mutsva otomatiki wekugadzira muchina we heparin une hunyanzvi hwepamusoro pane hwemanyorerwo. Heparin cap inogara iri chigadzirwa chakakurumbira mukambani medu, saka yaiwanzotarisana nemubvunzo mumwe chete uyo unodikanwa uri kudarika kupa. Asi ikozvino Dambudziko rese rakagadziriswa, iyo nyowani Yega otomatiki yekugadzira muchina ye heparin makumi maviri nguva kunyatso kupfuura nakare, iyo inochengetedza yakawanda nguva yebasa redu. Nekuti zvinongoda munhu mumwe chete kuti ashandise muchina uyu, saka rimwe basa rinogona kubhadhara zvakanyanya kune zvimwe zvinhu.
Kechipiri, nyowani yekugadzira michina ye heparin cap inopawo yepamusoro chigadzirwa. Imwe bhenefiti mhedzisiro kubva pamushini muchina havazive kuti chii chakaneta uye muchina haumbofi wakakanganisa kunze kwekunge waputsika. Mumazuva ekare, kambani yedu yaifanira kutambisa imwe mari yekuzorora kweimwe mbishi, asi ikozvino basa rinongoda kuisa zvigadzirwa mumuchina, batidza pasi, ipapo yepamusoro heparin cap yakagadzirira kushandiswa.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, mutsva otomatiki wekugadzira muchina unoderedza mutengo wevashandi. Ichokwadi chatinofanira kuziva kuti muchina uri kutsiva munhu. Inogona kunge isiri nhau yakanaka kune wese munhu, asi ndeyechokwadi inobatsira kambani kuronga zviwanikwa zvine musoro, zvinoreva kuti kambani inogona kushandisa mari yakawanda kuwedzera mhando yechigadzirwa, uye kambani inogona kushandisa mari yakawanda kudzidza hunyanzvi hutsva. Icho chine hutsinye, asi iko kusimudzira kwenguva.
Post nguva: Jul-17-2018
Mucheche Kudyisa Tube, Doro Kugadzirira Pad, Kuvhiya Nereza Sizes, Doro Pad, Kubvisa Catheter, Iv Catheter,